Internet speed နှေးနေလား ……? Internet speed ကိုနည်းလမ်း( ၅ ) မျိုးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးဖြစ်အောက်ကူညီပေးချင်ပါတယ်။အချိန်ရမှဖတ်ပါ ။ ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ရင်လည်းကျော်သွားလိုက်ပါ။ကျွန်တော် ရေးသားပေးတဲ့(5) မျိုးထဲမှာ နည်းလမ်းတစ်ခုကို (20 % ) နှုန်း တိုးပါတယ် တစ်ဆင့် ချင်းကိုသေသေချာချာနားမလည်လို့ကျော်လုပ်ရင်လည်း ရပါတယ် ။မိမိတတ်နိုင်သလောက်လုပ်
Control panel ကိုဖွင့် ပါ
bandwidth လုပ်ခြင်း (မြှင့် တင်ခြင်း )
If you are using Windows Operating System then you might not be aware of fact that 20% of of your total Internet bandwidth is ‘Locked’ for ‘Windows Update’ purpose. If you will perform following tweak then you can Increase your Internet Speed by 20% !
ဒါဆိုရင် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့( ဥပမာ – facebook စတာတွေမှာ ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အသုံးပြုလာနိုင်မှာပါ။
Mozilla Firefox အတွက်နည်းလမ်း
Internet Explorer အတွက်နည်းလမ်း
Google Chrome အတွက်နည်းလမ်း
‘Control Panel’က်ိုဖွင့် ပါ ။
OS တစ်ခုကနေ အချက်အလက်တွေကို ပို့ဖို့အတွက် network socket တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့က ကြာလာရင် overload ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုရလေးစေပါတယ်။
run ကိုဖွင့် ပြီး , cmd ရိုက်ပြီး enter ခေါက်; command prompt တက်လာရင် ( netsh winsock reset ) စာကိုရိုက် Enter ခေါက်လိုက်ပါ ပြီးရင် ကွန်ပြူတာကို Restart လုပ်ရပါမယ်။
← V Root 1.7.2 latest version
Thor: TDW – The Official Game v1.0.0 [APK] [Data] [offline] [617MB] [Data Direct Link Added] →
4 thoughts on “အင်တာနက် SPEED ကို ပိုမိုတိုးမြင့် သုံးစွဲချင်သူများအတွက်”
hlahla htwe says:
ပြောချင်တာထက်မေးချင်တာပါခင်ဗျာ bloger apk သုံးပီး postေ၇သားတဲ့အခါ စာေ၇းတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပေမယ့် ဓါတ်ပုံတင်ပေးတဲ့အခါတွေမှာ တစ်ပုံထက်ပိုပီးတင်လို့မ၇ဖစ်နေလို slect ပေးလို့လည်း၇ဘူးအကို နည်းလမ်းကောာင်းလေးများ၇ှိ၇င်ညွှန်ကြားပေးပါဦးအကို …..kolwin159@gmail.com ကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအကို လေးစားလျှက်ပါ
ကျေးဇူးပါအစ်ကို…ညီလေး စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် (h)